စာဖတ်သူအား သင့်တင့်လျှောက်ပါတ်စွာခေါ်ဆိုနည်းများ - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on December 10, 2014 at 15:54 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အီးမေးလ်ရေးသားရာတွင် ပထမဦးဆုံးတွေ့ရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ စာဖတ်သူကိုဘယ်လိုအစချီပြီး ခေါ်မလဲဆိုတာပါ။ မြန်မာတွေလိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာကို ဒုတိယ (သို့) တတိယဘာသာအဖြစ်ပြောဆိုသူတွေသာမက မိခင်ဘာသာအဖြစ်ပြောဆိုသုံးစွဲသူ (native speaker) တွေမှာတောင် ဒီပြဿ နာရှိပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်တန်းတွေမှာလဲ ဒီအကြောင်းကိုအထွေအထူးလုပ်ပြီးမသင်တာများပါတယ်။ အတန်းကျောင်းမှာလဲ ဒါမျိုးတွေသိပ်မသင်ပါဘူး။
သို့သော်လဲ စာဖတ်သူကိုဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုပြီး နည်းပေးလမ်းပြထားတဲ့ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ရေးထားသော) style guides လို့ခေါ်တဲ့ လက်စွဲကျမ်းများစွာရှိပါတယ်။ ဘယ်သူရေးတာကိုစံအဖြစ်သုံးမလဲဆိုတာကို ဝေခွဲရခက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူတိုင်းကိုလေးလေးစားစား ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့ အခြေခံလူ့ဂါရဝတရားရှိရင် အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ အောက်မှာကောင်းနိုးရာရာနည်းလမ်းတစ်ချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁) စာဖတ်သူ/ အီးမေးလ်ဖတ်သူကို လေးစားပါ။
ယခုအခါလူတစ်ဦးဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း စာ၊ အီးမေးလ်၊ တယ်လီဖုန်း message ဒါဇင်ပေါင်များစွာရရှိပါတယ်။ ဒါတောင် Facebook ပေါ်မှာဟိုကြည့်ဒီကြည့်၊ သတင်းစာ/ဂျာနယ်ဖတ်၊ online သတင်းတွေဖတ်တာတွေ မပါသေးပါဘူး။ ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ကသင်ရေးထားတာ တစ်ခုခုကိုဖတ်နေပြီဆိုရင်တောင် ကျေနပ်လောက်စရာပါ။ ဒီအချက်ကို ခေါင်းထဲထည့်ပြီးစာရေးပါ။ စာဖတ်သူကို သင့်တင့်လျှောက်ပါတ်စွာခေါ်ဆိုဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။ စာဖတ်သူကသင့်စာကို 'ဖတ်ပျော်' အောင်သူ့ကို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲပါ။
သင့်ထက်သက်ကြီးဝါကြီးသူတစ်ဦးဆီ ရေးမယ်ဆိုရင် "Dear Mr. Smith" (သို့) "Mr. Smith" လို့အစချီပြီးရေးပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရှေ့မှာ Dear ထည့်တာပိုကြိုက်ပါတယ်။ နောက်မှာ colon ခံပြီး "Mr. Smith:" လို့ရေးတာကတော့အခုခတ်မှာ အသုံးနည်းသွားပါပြီ။ စာကြီးစာခန့်တွေရေးရင်တော့ တစ်ချို့ကသုံးကြပါသေးတယ်။
၂) သင့်ထံစာရေးသူ၏ အရိပ်အခြည်ကြည့်ပြီးပြန်ရေးပါ။
အကြီးအကဲမဟုတ်သူတစ်ယောက်ဆီက အီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုပြန်စာရေးနေပြီဆိုပါစို့။ သူသင့်ကို ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုံးသလိုပြန်ရေးရင် မမှားနိုင်ပါဘူး။ ဒီဖက်ပိုင်းမှာ native speaker တွေရော၊ native speaker မဟုတ်သူတွေရော လူတော်တော်များများဟာ "Hi John" (သို့) "John" ဆိုပြီးပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရေးကြပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်သက်ကြီးဝါကြီးတစ်ချို့ထဲမှာတောင် သူတို့ဆီကိုရေးရင် "Dear" နဲ့အစချီတာကို ခန်းခန်းနားနားဖြစ်လွန်းတယ်လို့ ထင်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့ထက်အသက်အများကြီး ကြီးတဲ့ native speaker ဌာနအကြီးအကဲတစ်ယောက်ဆိုရင် "Hi ... " လို့ပဲဖော်ဖော်ရွေရွေသုံးတတ်ပြီး သူ့အောက်မှအမှုထမ်းတွေကလည်းသူ့ကို "Hi ... " ဆိုပြီးပဲ ပြန်စာရေးကြပါတယ်။ တစ်ခုသတိပြုရမှာက အီးမေးလ်မဟုတ်တဲ့ တရားဝင်ရုံးစာတွေမှာတော့ "Dear ...." ကိုမဖြစ်မနေသုံးရပါမယ်။
၃) အီးမေးလ်ဖတ်သူကို 'အို' နေပြီလို့ခံစားရအောင်မရေးပါနဲ့။
ဟိုးအရင်ကအသက်ကြီးသူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့အခါ Sir, Madam စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ဖို့၊ Mr, Mrs တို့ကိုသုံးဖို့ သင်ကြားကြပါတယ်။ သက်ကြီးဝါကြီးတွေကို John, Sandar စသည်ဖြင့် first name တွေနဲ့ခေါ်ဝေါ်တာကို ယဉ်ကျေးမှုမရှိဖူးလို့ ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ ယခုတော့ တစ်ယောက်ယောက်က ကျွန်တော့ကို Sir လို့ခေါ်မယ်ဆိုရင် ငါများအသက်အရမ်းကြီးလာလို့လားဆိုပြီး ခံစားရပါတယ်။ ဒီတစ်ချက်ကနဲနဲရှုပ်ထွေးနက်နဲပါတယ်။ အရှေ့နဲ့အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဓလေ့စရိုက်တွေမတူတော့ ဘယ်လိုခေါ် ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် အမေရိကန်နဲ့ ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေက ကိုယ်နဲ့ရွယ်တူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို Mr တို့ Mr တို့ သုံးပြီးခေါ်တာကို ယဉ်ကျေးလွန်တယ် (over ဖြစ်တယ်) လို့ ခံစားကောင်း ခံစားရမှာပါ။ ကိုယ့်ထက်သက်ကြီးဝါကြီးတွေကိုတော့ အရိပ်အကဲကြည့်ပြီး ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲဖို့ပဲ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ထိုသူတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ဖူးတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကို မေးကြည့်လို့လည်းရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလည်းရှိပါတယ်။
၄) ကလေးတွေထံ အီးမေးလ်ရေးသားခြင်း
အကြောင်းတစ်စုံတရာထူးခြားခြင်းမရှိရင်၊ နောက်ပြောင်ချင်တာမဟုတ်ရင် ကလေးများကို first name နဲ့ပဲ ရေးသားခေါ်ဝေါ်ပါ။
၅) Email signature ကိုလေ့လာပြီး ခေါ်ဝေါ်ပါ။
Email signature တစ်ခုကိုကြည့်ရင် ပိုင်ရှင်ကဘယ်လိုခေါ်တာကြိုက်သလဲ ဆိုတာရိပ်ဖမ်းသံဖမ်း သိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ သူက "Richard Nott, MD" လို့ရေးထားတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင်သူ ဆရာဝန်ဆိုတာ သိစေချင်တာသိသာပါတယ်။ ပြန်စာရေးတဲ့အခါ Dr. Nott (သို့) Dear Dr. Nott လို့ပြန်ဆိုဖို့ လိုပါတယ်။ Maj. Richard Nott လို့ရေးထားရင် Dear Major (သို့) Dear Major Nott လို့အစချီလိုက်ပါ။
လူတော်တော်များများဟာ ဒီလိုဘွဲ့ထူး ဂုဏ်ထူးတွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ရလာတာမဟုတ်ပါဖူး။ ဒါကိုသင်က လျှစ်လျှူရှုလိုက်ရင် အနာဂတ်ဆက်ဆံရေးကို အဟန့်အတားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on December 10, 2014 at 16:56
thank for your article.
Permalink Reply by Ohn Mar Soe on December 10, 2014 at 17:27
Permalink Reply by Aung Win Naing on December 10, 2014 at 17:49
Permalink Reply by wut yi on December 11, 2014 at 9:53
Note that with thanks...
Permalink Reply by Nay Win Htun on December 11, 2014 at 12:40
Permalink Reply by ko ko oo on December 12, 2014 at 10:38
Dear Soe Soe Win, Thanks for your sharing.
Permalink Reply by Khin Nilar Aye on December 12, 2014 at 11:09
Permalink Reply by mayzinthin on December 23, 2014 at 19:37
Permalink Reply by spring song on January 1, 2015 at 9:52
Permalink Reply by yarzarkoko on January 2, 2015 at 14:38
မိုက်တယ်... :) .. ဟုတ်တယ်ဗျို့ ကလေးတွေနဲ့ စာရေးရင် အရမ်းသတိထားရတယ်... ကျေးဇူး...
Permalink Reply by NawDin LaUng on January 16, 2015 at 5:53
Permalink Reply by U Hla Htay on March 5, 2015 at 21:14
လူမှု့ဆက်ဆံရေး အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းလေးတွေကို
လေ့လာခွင့်ရလို့ ကျေးဇူး ကမ္ဘာပါ။